Maqaal: Raggi ka Run sheegay Badbaadinta Qarankooda – Radio Daljir
Abriil 12, 2018 3:47 g 0
Wadani Farmaajo Wadani Gandhi Wadani Mandela
Soomaalidaa ku maah maahda “wixii rag ukoco,rabina aqbalo waa rumoobaan” dalka India waxaa u kacay rag waxaana maskax u ahaa iyo hogaamiye Gandhi waxa uu ku guulaystay in dalkiisa uu kasaaro heerkii hooseeyay iyo dhibaatadii gumaysi ee haysatay. Wadanka South afrika rag baa u kacay waxaa hogaamiye iyo maskax u ahaa Mandela,oo dalkiisa kasaaray cadaalad daradii isticmaarsigii haystay oo gaarsiiyay heerka uu joogo maanta.
Dalal badan oo dunida ah ayaa qalalaaso siyaasadeed,dagaalo sokeeye gumaysi iyo dawlad la aanba waxaa kasaaray nin ukacay oo daacad u ah dalkiisa oo ah wadani.
Dalkeena Soomaaliya,oo hore gumaysi u kala qaybiyay qaybo shan ah,dad isku diin ah isku af ah isku dhalasho ah isku dal ah inagoo ah,ayaa hadana midii xorta ahayd gashay burbur kii uugu xumaa ee dal haleela.Maxaayeelay kol hadii dal kusoo dhaco MAQNAANSHO DAWLADEED,ayaa macnaheedu yahay,sharci majiro,qof waliba kuu dhici karaayo waa dhacayaa,oo waa dilayaa,oo waa kufsanayaa. Maxaayeelay malaha sharci iyo meel loo dacwoodo nidaam iyo kala danbayn maadaama booskaasi marayn yahay oo banaanaaday,oo dawladnimadii lalaalay oo lawaayay,arinku waa jaantaa rogan.
Kolkii dal sidaa noqdo,waxa uu gacanta u galaa waxmagaratada,danaystaha,dawlad diidka,dabadhilifka,oo u arka fursad ah dil waxaa dili karaysid maadaama aysan jirin dawlad ku qabanaysa.waxaa danbi laga galayaa marka dawlad lawaayo,caruurtii,haweenkii,waayeelkii iyo biri magaydo oo dhan. waxaa lagu gabood falayaa xaquuqdii wadaniga uu lahaa oo dhan.Tan weeye tan inagu dhacday.
Dalkeena soomaaliya waxa uu kaharay dartankii iyo hormarkii dawladnimo ee uu hormuudka ka ahaa iyo safka hore afrika iyo aduunkaba.waxaan u noqonay jaahilnimadii iyo qabiilkii aduun yadu waa hore ka soo gudubtay oo dunidu ka hormartay qarniyo tagay. waa burburay dhan dhismo dalka ah,dhan caafimaad,dhan nabad galyo,dhan waxbarasho,dhan dhaqaale,dhan sharaf iyo karaamo qof ahaan,dad ahaan,diin ahaan,iyo dal ahaanba.
Dalkeena wuxuu baylah u noqday maafiyada caalamiga ah oo inaga dhex samaystay kuwo soomaali ah oo u shaqeeya,waxay xaalufiyaan badeena,sunbay ku shubaan,waxay dalkeena ka gurtaan dhagxaanta noocyadooda qaaliga ah,waxay dalkeena kufaafiyaan diimo iyo dhaqamo aan ahayn diinteena islaamka ah iyo dhaqankeena wanaagsan midna.waxaas oo dhan dad soomaaliyeed ayaa u fudeeya oo ah dawlad diid.
Waxaa dalkeena bad iyo bari iyo cirba laga soo galiyaa lacag iyo maan dooriyayaal loogu talagalay,in dadkeena lasiiyo si bulshadeena looga dhigo kuwo ukala jajaban qabiilooyin iyo jifooyin taasoo loola jeedo in aynaan u istaagin soomaalinimadeena iyo qaranimadeena. waxaa la qorsheeyay mudadaas nusqarniga ah in aan sidaa ku sii jiro oo laynagu siihayo sifahaas guracan.
Baadigoobkii dawladnimo,ee laysku dayay in dib loo yagleelo dawladnimadii soomaaliyeed,waxay qolaba meel soo gaarsiisaba waxaa ugu danbayn rabbi inoogu dhiibay hogaankii sare ee dalkeena shaqsi soomaaliyeed oo aan inagu cusbayn sanadkii 2017.Waa madaxwayne Farmaajo oo aynu ogsoonahay wax qabadkiisii xiligii uu mudo lixbilood ah maamulaayay xukuumada oo uu ahaa Raysal wasaare.
Dadka soomaaliyeed intooda badan xiligaa waxay xaqiiqsadeen in uu yahay Farmaajo nin daacad u ah diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed. waxaa la hubsaday la qiray lana fahmay hawlkarnimadiisa,shaqada sida kartidiisa yaabka leh,go aan qaadashada, karamada xaragada iyo geesinimadiisa aan xadka lahayn. shacabka soomaaliyeed waxay indha hooda ku arkeen oo ahaa sidii uu amaankii wax uga qabtay dalkana uugu shaqeeyay ayaa waxay keentay in ay udoortaan madaxwayne si aqlabiyad ah,iyadoo golihii baarlamaanka soomaaliyeed ee wakiilka u ahaa umada soomaaliyeed,shacabku siiyeen fariin cad oo ah waxaad noo doortaan ninkaad hor illaahay u aragtaan in uu dalka iyo diinta iyo dadka daacad u yahay oo anfacayo una shaqaynaya.
Xildhibaanadii way arkaan dadkii musharixiinta ahaa ee goobta joogay ninkii sifahaas lahaa ee layaqiinay oo la hubay isagiibay dad waynihii usoo dooreen iyo dalkeenii waana FARMAAJO.
Hadaba mudada yar ee aadka u yar ee hada uu kursiga fadhiyo,waxaa soomaaliya oo dhami aragtaa sidii laga filaayay si kasii xawli iyo xawaaro dheer ayuu durba dalkii hawshiisii isugu dubariday.uugu horaynba waxa uu inoo dooray raysal wasaare ah nin go aan leh wadani ah ka fog wixii dalkeena la haray ee ah qabiil iyo kooxaysi iyo gobolaysi iyo kala qoqob intaba.raysal wasaaruhu wuxuu soo dhisay gole wasiiro oo shaqaynaya la arko wax qabadkooda.
Madaxwayne Farmaajo waa shaqsi leh gobonimo iyo sharaf iyo haybad waana mid gaalo iyo muslim soomaali iyo aduun waynuhuba ku qadariyo hayeeshee waa umuur illaahay bixiyo kuu doonana siiyo adoomadiisa.Madaxwayne farmaajo waxa uu sugay amaankii caasimada,isu sheegi mayno siday ahaan jirtay waa ka dharafsanahay maantana waad aragtaan nabada iyo wanaaga ka muuqda.ciidankeenii waxa uu kadhigay sida ciidamada dawladaha aduunka oo kale oo mushaharkoodu waa joogto bilwalba ah.
shaqaalihii dawladu waa wada mushahari,waxa uu ladagaalamay qaraabo kiilkii,musuqmaasuqii,ee xaysigii,iyo dhicii sir iyo caadba ahaa.waxaynu shalay ahayn dal lagu tunto oo la quursado maantana dal leh tix galin ayaynu nahay oo laynaguma soo dagdagi karaayo. sumcadii iyo sharafkii dawlada soomaaliya iyo qafka wadaniga ah ee soomaaliyeed ayaa soo noqday.maanta dal baynu nahay leh dawlad nin walbaa karabo heshiis iyo xiriir ganaacsi.
Shacabka soomaaliyeed waxa uu difaacanayaa dawladnimadiisa,dalkiisa,diintiisa,waana garabtaagan yahay dawladnimada soomaaliya waana hirgalinayaan.waxaana keenaya awlaba shacabka soomaaliyeed ma xumayn ee waxay waayeen madaxwayne dalka daacad ugu shaqeeya kasoo hada ay gacanta ku dhigeen xajisanayaana.hakaa waxaad ka fahmaysaa in dadka soomaaliyeed yihiin dad fiican oo lagu ciyaaray.
Qofkastoo soomaaliyeed dal iyo dibadba wuu arkaa in Madaxwayne Farmaajo hadafkiisu yahay in dalkeena lagu soo dabaalo dawladnimo buuxda,amaan iyo kala danbayn,in caruurteenu lamid noqdaan caruuraha aduunka ee haysta waxbarasho amaan iyo caafimaad.waxa uu doonayaa in aan ka xorawno tuugsiga shisheeye iyo faragalinta shisheeye oo aynu ahaano noqono dad qableh jira leh karaamo iyo sharaf oo ah soomaali.
Hadaba markaad soomaaliyeey xasuusataan,aragtaan waxaynu dhib soomaray walina qaar kusii jiro,hadii illaahay inooga gargaaray oo inoo diray madaxwayne inoo cadaalad falaya inta tabartiisa,wanaag inala doonaya dadkeena iyo dalkeenaba sow markaa waajib inaguma aha in aan illaahay u mahad celino oo dawladnimadeena iyo dalkeena dhisano? markii illaahay dhib kaafaydo balaayo lama sheegto waa lagu xamdiyaa wuuna kuu siyaadin kolkaa khayrka.
Alaan idinku dhaariyee soomaaliyeey,bal ufiirsada kolkii dhan walba laga fiiriyay Madaxwayne Farmaajo ee nin walbaa kafakaray bal in uu ina wax ceeb ah ka helo farmaajo iyo dal dalool uu ku dacaayadeeyo,waxba waa laga waayay! markii qolyahan dawladiid ay waxba ka waayeen,waxay ceeb uuga dhigeen “Waxaa Adeer u ahaa Maxamed siyaad bare” waayo way ogyihiin farmaajo qabyaaladiiste ma ahan,oo tuug hantida dadwaynaha dhaca maha sidii kuwii ka horeeyay,oo khaainul wadan maha,oo dagaal oogayaashii kuma jirin,waa ninkaa illaahay yaqaan ee sharaftabadan ee daacada u ah dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba umada soomaaliyeedna jecesha hay. kolkaa aniga waxay ilatahay amaysan danbi ahayn qof lagu ciqaabo oo xuquuqdiisa wadaniyadeed wax loogu dhimo xataa haduu maxamed siyaad bare ahaa aabihii ku dhalay asaadan shaqsiyan adigu dadka iyo diinta iyo dalka aadan waxba danbiya ka galin.
Madaxwayne farmaajo umada soomaaliyeed waa jeceshahay,isna waa jecel yahay,waxaase diidan kuwa maanta soomaaliya ku wada baraarugtay ee u adeegaya shisheeyaha ee ah Dawladiid. waxayna doonayaan in dalkeenu ahaado dawlad la aan oo ay sii ahaadaan Xaaraan quutayaal.horay udiideen madaxdii ka horaysay farmaajo.
Dalkeenu waa dal qani ah dadka soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin,amaan iyagaa dhisanaya dalka maalgashanaya,hormarinaya,ku raaxaysanaya badaha iyo xeebaha dalkeena,beeraha iyo quruxda dalkeena,waxaana larabaa oo kaliya taana lagu gaari karayaa dawladnimo.Kolkaas ayaa caruurteenu yeelanaysaa mustaqbal cad oo ay aduunka kula tartamaan ay ka hareen.hadaba kuwa cadawga inagu ah ee inoo diidan nabada iyo nolasha waa in aan cagta marinaa oo kasifaynaa dalkeena.
Dawladnimadeena waa in aan u huraa dhiigeena,maalkeena,nafteena maxaayeelay cadawbaa inoo tashaday diidan dawlad nimadeena hadaynu nahay soomaali.waa waajib dawlad iyo shacaba ina saaran in soo qabqabano kuwa inagu dhexjira ee dawlad diidka ah.
Gabagabadii waxan u rajaynaynaa umada soomaaliyeed in ay helaan nabad iyo nolo ay ku haystaan dalkooda hooyo.Madaxwayne farmaajo waa nin shaqo waqtigiisana galiya hawlaha qaranka,waxaana larabaa hadal yar iyo shaqo badan.soomaaliya madaxdii soomartay waxa uu uga badalan yahay Farmaajo waxaa weeye waa nin shaqo,hore waxaan u arki jiray madax uun had iyo jeer makarafoonka taagan oo hadal uun wada taasoo ku abuurtay dad waynaha niyad jab.waxaan madaxwaynaha uugu mahad celinaynaa hadalka yar iyo hawsha badan.
Hadii dadwayne uu hadal iyo khudbad macaan oo subax walba iyo fiid walba loo jeediyo cid ku raaci lahaa waxaa la raaci lahaa madaxwayne cabdiqaasim iyo madaxweyne xasan sheekh.shaqada dalku maha uun madaxwayne in uu meel walba taagnaado ee waxaa haya wasaaradihii iyo wakiiladii uu diray,nin walbaana waa masuul wixii la raaciyay ayuuna masuul ka yahay,shaqaduna midka dhulka xaaqa ilaa madaxweyne waa qaybsantahay oo kala agaasimantahay. waa ku mahadinaynaa illaahay waa fajintiisa uu waa fajiyay dawladan shaqada fiican ay dalka ka hayso,waxaana rajaynaynaa in mardhaw fiisada dalkeenu noqoto mid qaaliya oo cid walbaa aanay sahal ku helikarayn.